GPU -ga M1 Max GPU ayaa ka fiican PlayStation 5 | Waxaan ka imid mac
M1 Max processor GPU ayaa ka fiican PlayStation 5
Way cadahay in Apple ay ku qodday soo -saareyaasheeda cusub ee ARM. Haddii aan hore ula yaabnay sanadkii hore Silicon -ka cusub ee Apple oo leh M1, muuqaalka dugaagga M1Pro y M1Max waxaa loola jeedaa kacaan cusub oo Macs ah.
Maaddaama MacBooks Pro -kii ugu horreeyay ee leh soo -saareyaashan aysan weli gaarin isticmaaleyaashii mudnaanta u lahaa ee iyaga codsaday, waa inaan aaminnaa waxqabadka Apple ku dhawaaqdo. Mid ka mid ah sheegashooyinkaas ayaa sheegaya in M1 Max's GPU uu ka sarreeyo kan awoodda badan. PlayStation 5. Ma runbaa? Waxaan u maleynayaa sidaas….
Shalay Tim Cook iyo kooxdiisa ayaa na tusay kan cusub MacBook Pro oo leh M1 Pro iyo M1 Max processor. Intii aan sugaynay tijaabooyinkii ugu horreeyay, oo aan arki doonno isla marka Apple uu bixiyo amarada ugu horreeya, war ay Cupertino daadiyeen ayaa soo jiitay dareenkeenna: Imtixaannadoodu waxay xaqiijinayaan in GPU -ga isku dhafan ee processor -ka M1 Max uu ka sarreeyo console -ka NextGen PlayStation. 5 oo ka socota Sony. Ku dhawaad ​​waxba.
Apple waxay soo gaadhay gunaanadkan sida soo socota: waxay tijaabisay tijaabada 16-inji MacBook Pro oo leh processor M1 Max, oo leh 10-core CPU, 32-core GPU iyo 64GB oo RAM ah marka la barbar dhigo MSI GE76 Raider iyo Razer Blade 15 Advanced. Buugga xusuus -qorka waxaa loo isticmaalay in lagu qiimeeyo waxqabadka GPU waxaana lagu qiyaasay inta teraflops ee soo -saareyaasha cusub ee M1 Pro iyo M1 Max ay qaban karaan. Oo kuwanu waxay ahaayeen natiijooyinka waxqabadka:
M1 8 cores = 2,6 TF
M1 Pro 14 cores = 4,5 TF
M1 Pro 16 cores = 5,2 TF
M1 Max 24-core = 7,8 TF
M1 Max 32 cores = 10,4 TF
Markaa doon dhowaan, ayaa la soo saaray M1 Max processor oo leh 32 cores GPU waxay wax ka qaban kartaa teraflops badan oo garaafyo ah (10,4 TF) marka loo eego Sony's PlayStation 5, maaddaama console -gaasi gaaro ugu badnaan 10,28 teraflops. Kuwani waa tirooyin ay shirkaddu dillaacday, mana garanayno duruufaha lagu helay.
Haddaba aan sugno oo aragno imtixaanka waxqabadka iyo xawaare aad u badan marka cutubyada ugu horreeya ee la iibiyo ay soo gaaraan gacmaha isticmaaleyaasheeda toddobaadka soo socda. Laakiin waxaan ku qanacsanahay in wax -qabadka hawl -wadeennadaasi aanay na niyad -jabin doonin haba yaraatee.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » M1 Max processor GPU ayaa ka fiican PlayStation 5
Waxay u egtahay kaftan: maro nadiifinta shaashadda ee MacBook Pro 25 euro
AirPods -ka cusub 3 waxay leeyihiin IPX4 qiimeyn biyo -la'aan ah